वामदेव गौतमलाई युवा संघका केन्द्रीय उपाध्यक्षको खुल्ला पत्र : इतिहास रच्ने कि कलंक रोज्ने?Nepalpana - Nepal's Digital Online
नेपाल पाना फाल्गुण २३ २०७७
क. बामदेब गौतम ज्यू,
तपाईंको मन खुलेर बोल्ने र यो उमेरमा पनि जोश जागरका साथ काम गर्न सक्ने क्षमताको म प्रशंसक छु। तर आज केही कुराहरु मनमा लागेकोले तपाईंसंग यो खुल्ला पत्रमार्फत सोध्न मन लागेको छ। आज तपाईं पार्टी एकताको अभियान चलाउँदै हुनुहुन्छ, चलाउनुस् स्वागतयोग्य नै छ। पार्टी एकता भएको त सबै कार्यकर्ता र शुभेच्छुकले हेर्न नै चाहेको छ। तपाईं सफल हुनुस् हाम्रो शुभकामना।
तर जति बेला पार्टीको दुई लाईन संघर्ष अन्तिम चरणमा थियो त्यति बेला तपाईं पार्टी फुटाउने लाइनमा लागेको समूहलाई किन साथ दिनुभयो? खुमलटार र कोटेश्वरमा पार्टी विभाजनको जड बलियो पार्ने कयौ बैठकमा तपाईंको उपस्थितिले उनीहरुको मनोबल बढाएको होइन र? सचिबालयको बैठकमा पनि त्यति बेला तपाईं मात्र आजको जस्तो तटस्थ बसिदिँदा आज पार्टी यो अबस्थामा आउने थिएन होइन र?
पार्टी कानुनी रुपले नफुटे पनि आज नेकपाभित्र भैरहेको दुई पार्टीको अभ्यासको तपाईं पनि एउटा प्रमुख जिम्मेवार ब्यक्ति होइन र? आज तपाईंको तटस्थाले कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिहरु धारासाय हुने अवस्थामा पुगेको छ। करीब दुई तिहाई जनताले कम्युनिस्ट सरकार बनाउन र केपी ओलीलाई सहज ढंगबाट प्रधानमन्त्रीको रुपमा देश चलाउन दिएको मत होइन र?
तर हिजो खुमलटार र कोटेश्वरको बैठकमा पुगेर पार्टी विभाजन गर्ने कित्ताहरुको मनोबल बढाएर तपाईले साथ दिएको मानिसहरु आफ्नै कम्युनिस्ट सरकार ढालेर हिजो जसलाई हामीले पुँजीपतिको रक्षक भन्दै कांग्रेसको बिरुद्ध भोट मागेका थियौं, त्यसकै दैलोमा प्रधानमन्त्री बुझाउन जाँदैछन्। यसमा तपाईंको पनि समर्थन छरु हामी बुझ्न चाहन्छौं।
यो देशमा फेरि आज नत्र भोलि चुनाब हुन्छ। हामी फेरि जनतामा भोट माग्न जान्छौं। त्यति बेला हामीले जनतालाई के भन्ने हो? हाम्रो नेता समाजबाद उन्न्मुख समाज होइन, सत्ता र नाताबाद उन्न्मुख समाज रोज्ने नेता हुन्रु कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धी रक्षा गर्ने सक्षम होइन बिदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने नेताहरु हुन? यी यावत प्रश्नहरु आज नेता कार्यकर्ताको मनमा खेलिरहेको छ।
केही स्वार्थ नमलिल्दा केपी ओलीसँग चिड किन? के गल्ती गरे प्रधानमन्त्रीलेरु देशको नक्सा बढाउनु गल्ती थियो? गरीब जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनु गलत थियो? किसानलाई सिँचाइको ब्यवस्था गर्नु गलत थियो? विभिन्न राजमार्ग बनाउनु गलत थियो? देशको हरेक कुनामा हबाई अड्डा आधुनिक बनाउनु गलत थियो? देशलाई विकासशील राष्ट्र बनाउनु गलत थियो?
नेपाल र नेपालीकै लागि कम्फर्टेबल सरकार बनाउनु गलत थियो? सुकुम्बासी र घरबिहीन जनतालाई घर र जग्गा दिनु गलत थियो? तुइन विस्तापित गरि झोलुङ्गे र पक्की पुल बनाई दिनु गलत थियो? किसानको हकमा उद्योगपतिहरुलाई घुडा टेकाई दिनु गलत थियो? विभिन्न अतिवादलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउनु गलत थियो? हो प्रधानमन्त्रीले एउटा गल्ती गरेकै हो।
विभिन्न नेताको नातावाद र कृपावादको स्वार्थलाई उहाँले मानी दिनुभएन। भ्रष्टाचार र अपराधीलाई संरक्षण दिने काम उहाँले गर्नु भएन र यही गल्ती उहाँबाट भएको हो। होइन र कमरेड?
हिजो इतिहासमा एकपटक माले-एमाले फुटाएर कम्युनिस्ट आन्दोलनमा कालो इतिहास रच्नु भएको तपाईले जसको पश्ताचाप आफै पनि विभिन्न मन्चबाट गरिरहनुभएको छ। समयले आज तपाईंलाई फेरि सच्याउने मौका दिएको छ। मेरो आग्रह छ। तपाईले नेपाली जनताको मन बुझ्नुस्। आम कार्यकर्ताको भावना बुझ्नुस्। तपाईं सहि समयमा सहि निर्णय लिनुस्। कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गर्ने योद्धाहरुको साथ र नेता बनेर हिड्ने कि कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सखाप पारी समर्पणवादी र सर्वसत्तावादी सँग हिड्नेरु कम्युनिस्ट आन्दोलनको उपलब्धिको रक्षक बन्ने कि बिध्वंशकहरुको सारथी बन्ने? इतिहास रच्ने कि कलंक रोज्ने? यो निर्णय लिन तपाईं आफै स्वतन्त्र हुनु हुन्छ। तर तपाईंलाई पनि हेक्का होस् इतिहासले सधै भबिष्यमा तपाईंसँग प्रश्न गरिरहने छ।
यस खुल्लापत्रद्वारा यदि तपाईं वा तपाईंको कुनै समर्थकलाई चोट पुगेमा म क्षमाप्रार्थी पनि छु।
संजीब कुमार सुरज झा
माधव नेपालले पार्टी फुटाउनै लाग्दा वामदेवको कडा प्रतिक्रिया
'ज्ञानी वामदेव', प्रधानमन्त्रीले नाइ भनेपछि संसदीय दलको बैठक एक शब्द बाेलेनन् !
कहाँ छन् बामदेव गौतम ?
फाल्गुण २३, २०७७ आइतवार १२:०८:२७ बजे : प्रकाशित